Caruur badan oo halis ugu jirta in aanay caawimo helin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruur badan oo halis ugu jirta in aanay caawimo helin
La daabacay fredag 21 november 2014 kl 11.29
Caruurta ku sugan khatarta ayaa halis ugu jira in aanay helin caawimo, maddama oo xafiisyada arrimaha bulshada ay haysato shaqaaale gabaabsi. Sidaa waxaa shaaca ka qaaday barnaamijka Kaliber ee ka baxa idaacada P1
Barnaamijka Kaliber ayaa baadhitaan ku sameeyay 22 maamul degmo, baadhitaankaas oo daaha fayday in kala badh maamuladaas degmoooyinku ay 1-dii bishii Oktoobar ee sannadkan uu qof ku sime ahi u joogay xafiiska u qaabilsan caruurta iyo dhalinyarada.
Maamulka degmada Hultsfred ayaa 9-kii umuroodba, saddex ayaan haysan qof masuul ah. Sida ay idaacada P4 Kalmar ay u sheegaysay Anna Edvarsson.
-Way adagtahay in la helo shaqaale leh aqoontii loo baahna, tan iyo wixii ka dambeeyay xagaagan oo ahayd markii hey’adda qaabilsan arrimaha bulshadu ay soo saartay go’aan ah waa in qofka masuul ka noqonaya arrimahan uu leeyahay aqoon sare la xidhiidha arrimaha bulshada ama mid u dhiganta.